नेकपा : चर्चा माहाधिवेशन र यसभित्रको अन्तरकथा – Karnalikhabar
नेकपा ठुलो दल । विशाल संगठन । सयौ केन्द्रीय सदस्य । लाखौ कृयासील सदस्य । कार्यकर्ता र शुभचिन्तक । समग्रमा विशाल समुह । देशकै विशाल पार्टी । जनताद्वारा जनअनुमोदित जनताको प्रीय एउटा राजनितीक दल । कुनै कमि छैन । पुर्ण बहहुमतको सरकार छ । जनमत छ । विज्ञ छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुमा एकलौटी जस्तै प्रतिनिधित्व छ । अन्तत: देशका हरेक निकायहरु पुर्ण नेकपाको छातामुनी छन् ।
नेकपाकालागी यो सुनौलो अवसर हो । काम गर्न, गरेर देखाउन र आफ्नो संजाल थप विस्तार गर्न । यो समय पार्टी , संगठनीक संरचनाहरुको सकृयता र कृयासिलतालाई थप मजवुत बनाउने बेला पनी हो । पार्टीले गरेका हरेक निर्णयहरुलाई कार्वनयन गर्दै जनभवना अनुरुप हरेक निकायहरुलाई परीचालन गर्नु पर्ने जिम्वेवारी पनी नेकपाकै काॅंधमा छ ।
नेकपाको एकलौटी सरकार र सरकारमा गतिसिल,अनुभवि नेतृत्व र अनुभवि तथा परीपक्व मन्त्रीहरु हुनुपनी नेकपाकालागी ईतिहाॅंसकै ठुलो अवसर हो । नेपालको ईतिहाॅंसमा कम्युनिष्टहरुले पायको एकलौटी अवसर सायद पहीलो हो । कम्युनिष्टको यति विशाल अवसरलाई परीणाममा देखाउनु अर्को अवसर हो ।
नेकपा भित्र यतीधेरै सपाट पक्षहरु भयपनी केही कुराहरुमा आन्तरीक अन्यौलताहरु देखीयका छन् । सरकार संचालनमा बाधा,संगठनिक विस्तारमा ढिलासुस्ती,पार्टीभित्रै असहयोग,आरोप प्रत्यरोप र आन्तरीक गुठवन्दी । नितीगत अन्यौलता र पार्टीको भाबि कार्यदिशा के भन्नेकुरामै नेकपा आन्तरिकरुपमा बिभक्त अवस्थामा छ । नेता, कार्यकर्ताहरुमा अन्यौलतता छ । आरोप प्रत्यारोपको स्थिती सतहमै छ ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिच पार्टी एकीकरण गर्ने बेलामा केहीकुरामा अस्पष्टता भयकै कारण यो अवस्था आयको देखिन्छ । दुई पार्टीले बोकेको फरक राजनितीक सिध्दान्त र एकीकरण पछी पनि सिध्दान्तमा टकरावको स्थिती छ । नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र नेकपा माओवादीको एक्काईसौ शताब्दीको जनवाद विचको शैदान्तिक भिन्नताकै कारण आन्तरीक आत्मियता नबढेको देखीन्छ । फरक-फरक प्रशिक्षण बाट आएका नेता, कार्यकर्ता मानसीक रुपमा अझैपनी विचलनमा छन ।
नेकपाभित्रको यो आन्तरीक मनमुटाव,आन्तरीक कलह र आन्तरीक विचलनको निरुपणको अन्तिम अस्त्र भनेकै अब हुने एकताको माहाधिवेशन हो । जसले नेकपा भित्रका तमाम असहमती असमझदारीहरुको निरुपण गर्ने छ । माहाधिवेशन बाट नै नेकपाको भावी कार्यदीशा तय हुनेछ । माहाधिवेशनबाट निर्वाचित पर्टी प्रतिनिधीहरुले बोकेको सैदान्तीक र राजनितीक कार्यदिशा नै नेकपाको नयाॅं शैदान्तिक कार्यदिशा हुनेछ । तत्पस्चात नेकपा एकिकृत शसक्त नेकपाको रुपामा परीचित हुनेछ ।
नेकपाका आधिकांस नेता कार्यकर्ताहरुले एउटा शसक्त र शैदान्तिक रुपमा एक नेकपा खोजेको प्रश्टै देखीन्छ भने पार्टीभित्र आफ्नो आत्मसम्मान पनी । उनिहरु चाहान्छन, अब बन्ने नेकपा नेताहरुले आपसी सहमती गरेर टिकालगायर ल्यायका टिके नेकपाका नेता कार्यकर्ता होईन स्थानिय स्तर देखी केन्द्रसम्म निर्वाचनको माध्यमबाट निर्वाचित नेता तथा पार्टी प्रतीनिधी हेर्न चाहेका छन । निर्वाचित व्यक्तीमात्र आफ्नो पदप्रती उत्तरदाईहुने आम नेता तथा कार्यकर्ताहरुको बुझाई छ ।
नेकपाका सातै प्रदेशका प्रदेश संयोजकहरुले पनी अब ढीलानगरी चाॅंडो भन्दा चाॅंडो माहाधिवेशनमा जानुपर्ने भनाई राख्दै आयका छन । सबैकुराको छिनोफानो माहाधिवेशनलेनै गर्ने उनिहरुको भनाई छ । नेकपाका शुदुरपश्चिम प्रदेश संयोजक कर्ण बाहादुर थापाले निती र नेतृत्वको बैधानिक फैसला माहाधिवेसन बाटै हुने भयकोले माहाधिवेसन यथाशक्य छिटो गर्ने र सबै विषयको वैधानिक समाधान निकाल्ने नेकपाको अहीलेको मुल कार्यदिशा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयको छ । माघमा बसेको केन्दीय कमीटीको बैठकले २०७७ चैत्र २५-२९ मा माहअधिवेसन गर्ने निर्णय गरीसकेकोले यसबाट कोहीपनी पछाडी हटन नसक्ने र पार्टीको निती,विधी,विधानलाई सबैले मान्नुपर्र्ने बताउनु भयको छ । यसैगरी नेकपा बर्दीयाका प्रभावशाली नेता दामोदर अर्याल ले माहाधिवेशनका लागी पार्टीपंती सबै एकभयर लाग्नुपर्ने र माहाधिवेशन सहमतीय प्रकृया नभई प्रतिश्प्रधात्मत हुनु पर्ने सबैले आफ्ना प्रतिनीधिलाई निर्वाचन प्रकृयाद्वारा चुन्न पाउनुपर्ने बताउनु भयको छ ।
नेकपाले माहाअधिवेशनमा होमिनुपुर्व धेरैकुराहरुमा आन्तरीक वहस गर्नु जरुरी छ । जस्तो :- पार्टीको भावि मुख्य कार्यदिशा के ?
१ – जबज कै निरन्तरता की २१औ सताब्दीको जनवाद ? या जनताको जनवाद ?
२ – वा दुबैलाई मिलायर नयाॅं कुनै ?
३ – माहाअधिवेशनमा कुन पद्दती अवलम्बन गर्ने ? भागबण्डामै जाने कि निर्वाचनमा ?
४- माहाअधिवेशनमा जिल्ला, प्रदेश हुदै केन्द्रसम्मकै नेतृत्व चयन गर्ने कि, केन्द्रको मात्रै ? यि लगायत अनेकन विषयमा बहशहुनु जरुरी छ । सैदान्तीक र ब्यवहारीक पक्षमा सहमतीहुनेहरु माहाअधिवेशनको तयारीमा लाग्छन् विमतीहुनेहरु अलगिन्छन ।
नेकपा माहाअधिवेशनमा होमिनु पुर्व नै अहीले देखीयका तमाम मतभिन्नताहरुमा बहसको बाटोमा जानु जरुरी छ । देसैभरी छरीयर रहेका पार्टीका नेता,कार्यकर्ता र आम जनताको रायबुझ्ने र त्यसको मर्म अुनुकुल निर्णयमा पुग्नु पर्ने देखीन्छ । यदी नेताहरुले आम कार्यकरताहरुको भावना विपरीत सहमतीको नाममा टीकालगाएर पार्टी प्रतीनिधी चयनगर्नेहो भने यो नेकपाकै लागी घातक हुनेछ । देशैभरीको माहोल हेर्दा नेकपाका सम्पुर्ण स्थानिय,जिल्ला र प्रदेशका नेतातथा कार्यकर्ताहरु निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्ना नेताहरु चुनीनु पर्ने पक्षमा देखीयका छन् ।
नेकपाले माहधिवेसनअघी नै आन्तरीक विमतीहरु पाखालगाउन सक्नुपर्छ । यदी यसरीनै अल्मलीरहनेहो भने माहाधिवेशन अघिनै नेकपा फुटन सक्ने खतरापनी उत्तीकै छ । यो खतरालाई टार्न सक्नु पर्दछ । मिल्न सक्नु पर्दछ र मिलाउन सक्नु पर्दछ । यसकालागी आम नेता,कार्यकर्ताहरुले पार्टीको नेतृत्वलाई खबरदारी गर्न जरुरी छ । यदी मिल्नै नसक्ने हो भने विकल्पहरुको खोजि गरीनु पर्दछ ।
नेकपा संगै नेपाली कंग्रेस पनी माहधिवेशनको तिब्र तयारीमा छ । केही नयाॅं तथा केही पुरानै एजेण्डा बोकेर माहाअधिवेशनमा जानलागेको कांग्रेसकालागी नेकपा भित्रको यो किचलोले माथि उक्लीने थप नयाॅं खुड्कीलो बन्न सक्छ । एक टेलीभिजन अन्तरवार्तामा नेपाली कांग्रेसका शक्तीसाली नेता तथा सभापतीका दाबेदार शेखर कोईरालाले कांग्रेस अब समाजबाद संगै हिन्दुराष्ट्र र संबैधानिक राजतन्त्रलाई आफ्नो एजेण्डा बनाउने बताय । उनले हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रलाई जनमत संग्रह मार्फत छिनोफानो गरीनु पर्ने समेत पटक-पटक बताईसकेका छन् ।
नेकपा यसैगरी आन्तरीक कलहमै रहीरहने, जनतामाझ एक भयर नजानेहो भने आज सम्मका उपलब्धीहरु गुम्ने खतरा त छदैछ कम्युनिष्टहरु प्रती जनतामा बितिष्णा जाग्ने निश्चित छ । तसर्थ समयमै संम्यम र सजकताका साथ अगीडी बढनु सबैकालागी हितकर हुनेछ ।
अघिल्लो - रवि लामिछानेको सुदुरपश्चिम यात्रा: सहिद गोविन्द गौतमको अपमान गरेको आरोप
वडा अध्यक्षकाे निर्देशनमा स्थानीय माथि कुटपिट भएको स्थानीयकाे आराेप (फोटोफिचर) - पछिल्लो